हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: म किन गुरु पुर्णिमा मान्दिन
दूर्जेय चेतना July 7, 2009 at 4:24 PM
दिन कुकुर तिहार मानेर बाकी दिन भुस्याहा बनाउने परम्परा म मरीकाटे मान्दिन ... राम्रो कुरा गर्नु ‍भो हा हा हा
आकार July 7, 2009 at 6:37 PM
ह्‍या हावा ब्रो ! यस्तो कुरा अलि सुहाउँदैन यार ! बाउलाई नै नटेर्ने, मम खान डिस्टर्ब गर्‍यो भनेर, जनै बिष्णुमतीमा फ्याल्दिने ? यसो अलि गर्नु भएन नि हावा ब्रो ?
आज को ले चाँहि, कन्पारो ततायो है, मेरो ! म:म नै खाएपनि बाहुनबाद जगाइदिए, तर भैँसी को मम चाँही म मरिगए खान्न है, टेस्ट त गर्‍या हो तर एकपटक बिरामी परेदेखि छाडिदिँए ।
परम्परा भन्ने कुरा, हावा भर मा राखिएको हैन । सबै परम्परा राम्रा छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही परम्परा राम्रा छन् । हामी आधुनिकता को नाम मा यति अघि बढिसक्यौँ कि, हामी कसैलाई नटेर्ने, कसैको डर नमान्ने भइसक्यौँ । अनि अलिकति डर पनि बाँकी भएन भने, मान्छे बिग्रिन्छ रे ! बर्षभरि अरु बेला त सम्झिएन, कम्ति मा एकदिन त गुरुलाई सम्झिउन भन्न खोजेको हो, यस गुरुपुर्णीमा को परम्परा ले तर तपाई ले त अर्कै अर्थ लगाउनुभएछ । अरुबेला नमान्ने आज चाँहि किन मान्ने भनेर !
हुन त आज गुरुपुर्णिमा तर आज मैले गुरुहरुकै खेदो खनेँ, साह्रै झोँक चलेर !
अरुबेला मान्नुहुन्न भने पनि, एकदिन त मान्नुस भन्दा, नराम्रो त नहोला हैन र ! विशेष भत्ता खाने विशेष लोभ ले साह्रै लोभि बनाउँदैछ है, हावा ब्रो हाहाहा !
म नेपाल एफएम ले फुक्ने बिज्ञापन 'कसैलाई आदर नगरौँ, ठूलो नठानौँ' भन्ने जस्तो स्तरहिन विज्ञापन मलाई मन पर्दैन । सायद सुन्नु पनि भएको होला, धेरै स्वतन्त्र बनाउने निहुँ मा त्यो रेडियो मा बज्ने यो सामाजिक सन्देश ले सँधै मेरो कन्पारो तताउँछ, अरुलाई पनि दिग्भ्रमित बनाउँछ । कुनै व्यक्ति महान छ, ज्ञान मा केही अब्बल छ भने जोसुकै भएपनि मान्नुपर्छ । तर यही नमान्दा नै, आज दुर्दशा भा'को जस्तो लाग्छ ।
बाईक मा तपाई हुँकिनुभयो भने, ट्राफिक लाई टेर्नुहुन्न । बसका ड्राईभर खँलासी ले त ट्राफिक टेर्दै टेर्दैनन्, अझ महिला ट्राफिकलाई त सि्टि नै बजाउँछन् । अनि हामी बस भित्र भएका पनि, ट्राफिकलाई तथानाम गाली गर्छौँ, ड्राइभर कै साथ लागेर । यो किन भइरहेछ भने, हामी कसैलाई मान्दैनौँ, स्वतन्त्रता को नाउँमा हामी मनपरी गर्छौँ । हामीमा ज्ञान छैन, सहि र गलत छुट्याउने, अब गुरु नै छैन भनेपछि आँफै जानिने मौका एकदम कम हुन्छ । अत: ब्रो आफ्नो गुरु र मान्यजन को उपहास चाँहि गर्नुहुँदैन है ।
होलान् केही गुरु गोरु पनि भएकाछन् । अस्ति ख्यातिलाई अपहरण गरेर, टुक्रा टुक्रा पार्ने पनि गुरु नै रहेछ, स्कुल मा पढाउँदोरहेछ केही अघिसम्म । हो ब्रो, त्यस्तालाई चाँहि गुरु मान्नु भएन । तर तपाई ले लेखेको पढ्दा त, कसैलाई नमान्ने छनक आउँछ । हो नि, त्यो बिरेन भन्नेलाई कसैको डर नलागेरै, नमान्ने भएरै, त्यस्तो पाशविक र घृणित काम गर्यो । गुरु पनि सहि र गलत हुन सक्छन् तर आफू जतिसक्दो सही नै हुनु पर्छ । 'आफू भलो त जगत भलो' ।
ओ हावा ब्रो, बाउलाई र गुरुलाई सरी भनौँ है ! यत्ति साह्रो ज्यादती पनि नगरौँ बूढा बाउलाई !
Basanta July 8, 2009 at 4:06 AM
wordflows July 8, 2009 at 5:44 AM
तपाइ को कुरो पनि ठिकै हो। हिजो आज student ले teacher लाइ respect गर्नै छोडिसके जस्तो लाग्छ। गरे पनि धेरै कमले मात्रै।
हावा The Wind July 8, 2009 at 8:04 AM
कतै पुराना कुरा त सम्झाएन दुर्जेय ब्रो
ओ आकार ब्रो, काम छैन कि क्या हो कमेन्ट पनि त्यती लामो लेख्ने ? बाहुनहरु लोभि हुन्छन भनेको हो रैछ.. भत्ता पाईन्छ भनेर गर्नु गाली गरे आकर ब्रो ले.. ल ठीक छ तपाईं लाई भत्ता पर्‍यो.. हाम्रो केन्द्रिय कार्यालय घाना को बैंक बाट तपाईंलाई मेल आउँदैछ जन्क बक्स तिर चेक गर्नु होला.. हेहेहे
ओ बसन्त ब्रो, कस्लाई लाइन मारेको तपाईं को घर तिर चेला बेटा छैनन कि क्या हो
ओ worldflows ब्रो, जे लेखे पनि ठीक हो भन्ने यार यो त भएन नि ;)
आकार July 8, 2009 at 8:28 AM
ओ हावा ब्रो, यसो कमेन्ट हेर्दा त सबै बाहुनहरु ले मात्र कमेन्ट गर्‍या छन् है ! हाहाहा आयो, आयो, स्पाम मा आइपुग्यो !
Dilip Acharya July 8, 2009 at 9:29 AM
Dilip Acharya July 8, 2009 at 9:45 AM
आज भने हावा ब्रोलाई अलिकता ‘लेक्चर’ समेत दिएर भत्ता पनि पचाउने मौका मिले जस्तो लाग्यो :)
गुरु पूर्णिमालाइ हामी “गुरु पूजा” पनि भन्छौं, मतलब गुरुलाई यो दिनमा पूजा गर्नु पर्छ र गरीन्छ पनि (मान- सम्मान र आदर त बर्षै भरी गर्नु परी हाल्यो नी) । यो एक दिन गुरु बनाएर ३६४ दिन गोरु बनाउने दिन हैन है । ३६४ दिन सम्मान १ दिन विशेष सम्मान । तपाईको कुरा त एक दिन गणतन्त्र दिवस मनायो भने ३६४ दिन चाही देशमा अझै राजतन्त्र छ भन्या जस्तो भयो ।
तर तपाईको लेखन शैली भने गज्जब मज्जाको लाग्छ है मलाई (भत्ता काटिन्छ भने यो वाक्य फिर्ता लिन्छु हे हे हे)
हावा The Wind July 8, 2009 at 1:12 PM
आकार ब्रो लाई प्रथम पुरस्कार परेको मा बधाई छ.. मने कुरो के छ भने हिसाब त गर्या छैन तर मेरो बिचार मा ९०% नेपाली ब्लगरहरु बाहुन नै छन जस्तो छ.. यहाँ पनि बाहुनबाद.. गैर बाहुन मा बरु केटी ब्लगर को प्रतिशत बढी होला.. तर नेपाली केटीहरु अर्का को ब्लग मा कमेन्ट गर्दैनन इज्जत जाने खतरा हुन्छ
दिलिप ब्रो त क्याम्पस को मास्टर पनि हो कि क्या हो लेक्तुरे दिने हो भने म पनि टि यू मा पदेको बिद्यार्थी.. लेक्चर सेक्चर हैन नम्बर चाहियो.. तपाईं को तर्क को जवाफ दिन म सक्दिन तेसैले कुतर्क नगरनुस् भन्छु म
पहिलो पुरस्कार आकार ब्रो ले ऊछित्याइ सक्नुभाकोले दिलिप ब्रो लाई दोस्रो पुरस्कार परेको छ.. आकार ब्रो ले जस्तै स्पाम चेक गर्नुहोला.. हाम्रो मुख्य साखा कार्यालय अदिस अबाबा बाट तपाईंको पुरस्कार चलान गरिसकिएको छ..
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा July 9, 2009 at 8:02 AM
गुरुलाइ गोरुमात्र हैन "कुकुरमाले" फुटा टासेर त्यसैसँग तुलना गरेपछि खुब झोक चल्या'छ मलाइ पनि हावा ब्रोसंग ? त्यस्तो पनि गर्ने हो? हुन त एकदिन पुजा गरेर अरु दिन चाहि वास्ता नगर्ने संस्कृतिलाइ व्यंग्य गर्या होला ,तर अति भो ब्रो !
यसरी नानाभाति तर्क कुतर्क गर्न सक्ने बनाउने त्यो ज्ञानको श्रोतलाइ सम्झने/श्रद्दा गर्ने दिवस हो यो, "अन्धकार हटाउने" लाइ गुरु भनिन्छ, जसको स्वरूप मुर्त अमुर्त दुवै हुन सक्छ । त्यो एबिसी घोकाउने वा जनैमंत्र दान गर्ने मात्र गुरु हुन र?
हा हा हा अर्को लोभी आयो ब्रो!
हावा The Wind July 9, 2009 at 9:35 AM
लौ त कृष्ण जी ले पनि कुतर्क गरेर सोमालिया बाट आउने तेस्रो पुरस्कार हात पर्नु भो.. साथीहरु ले यस्तो कुतर्क गर्नु को कारण चाँही मलाई के लाग्छ तपाईंहरु आफुले चाँही कहिले पनि मास्टर भएर हेर्नुभाको छैन.. लोभि साथीहरुले कुतर्क गरेर हाम्ले भत्ता बाडन लिएको अनुदान नै सकियो फेरी अर्को डोनर खोज्नुपर्नेभो… खुइ…..य्य
Pakhrin August 15, 2009 at 7:02 AM
ए हावा ब्रो, डोनरको चिन्ता नगर्नुहोला । काठमाडौबासी छँदैछ नि, जति लिए पनि नसकिने गरी दिने, बरु तपाई पनि आफ्नो भाग लिन नबिर्सनु होला है । शहर पनि सफा हुने भएपछि, कायदाको पुरस्कार हुने भएन त? किनकी काठमाडौ पनि एक दिन मात्र सफा हुने भयो "सरसफाई दिवास" को दिनमा मात्र, गुरुहरु "गुरु पुर्णिमा" को दिन मात्र गुरु ठानिए जस्तै !
हावा De Wind August 16, 2009 at 11:29 AM
धन्यवाद पाख्रिन ब्रो,यो पोस्ट लाई समाबेशी बनाइदिनुभएकोमा.. ल है आकार ब्रो, जनजाती को कमेन्ट आयो..अब एकजना मधेसी ले पनि गरे त पूर्ण समाबेशी हुने रैछ
नत्र त आलोचना गर्ने ले भत्ता पाउछ भनेपछी यि लोभि बाहुनहरुले गर्नु गाली गरे..अनी पाख्रिन ब्रो, काठमाडौं बासीहरु झन महा किच्चक छन..बासी खाने बानी परेकोले होला.. तिनेर्ले फोहोर पनि दिदैनन अचेल देख्नुभएन अचेल घर बनाउदा खाल्डो पूर्न अनी सडक बनाउन फोहोर को प्रयोग गरेको?
बरु तपाईं देश बिदेश घुम्नु हुँदो रहेछ.. एस्सो गोरु उद्द्धार संस्था को लागि दोनेशन खोजौ न ब्रो.. खुसुक्क फिफ्टी फिफ्टी गरम्ला.. नेपाली दाजु भाई मिलिजुली खाम्ला.. हेहेहे